Semalt: Nohazavaina ny hosoka an-tserasera
Ny hosoka amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao dia anisan'ny fiantraikany be indrindra amin'ny vola an-tserasera. Ny tahan'nyNy fandosirana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fandikànana dia miteraka tahotra. Ny Etazonia dia nandrakitra lozam-pamoahana mihoatra ny 525 tapitrisa dolara, ary isaky ny $ 1.813 isam-bolanany niharam-boina araka ny National Center Collar Crime Center - aqualia thermal vichy serum c. Ny hosoka amin'ny aterineto any Etazonia dia nahangona 90 isan-jaton'ny ankamaroan'ny olonaNy hosoka an-tserasera manerana izao tontolo izao. Mampidi-doza izany mitaky ezaka be.
Ny sampan-draharahan'ny polisy miady amin'ny heloka bevava aterineto manerana izao tontolo izao dia mampiasa vola amin'ny sehatramiady amin'ny hosoka amin'ny aterineto, ary tsara ho an'ny tra-boina ny mitatitra amin'ny vola na karazana hosoka hafa mandeha amin'ny aterineto. Na izany aza,Ireo mpampiasa aterineto dia afaka mailo hatrany amin'ny famakiana lahatsoratra ao amin'ny hosoka amin'ny aterineto toy ny Security Watch blog miaraka amin'ireo fitaovana hafa. MisyMaro ny safidy momba ny tatitra momba ny hosoka amin'ny aterineto sy ny Komitin'ny Federal Trade (FTC) ho toy ny iray amin'ireo fikambanana matoky tenaho an'ny asa.
Ireo dingana arahina hitaterana ny hosoka amin'ny aterineto dia azo jerena ety anaty aterineto, fa eto aloha diafomba fanao mahazatra, avy amin'ny manam-pahaizana lehiben'ny Semalt ,Jason Adler, nampiasain'ireo mpisoloky an-tserasera.
Misy dokam-barotra maromaro an-tserasera izay mampivelatra ny olona mba hikambana amin'ny vondrona. BusinessNy trangan-javatra novolavolaina ho an'ny hosoka amin'ny aterineto dia mitaky vola goavana amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara sy fanaovana asa madinika an-tserasera fa mila sonia sy mandefavola ho an'ny mpikambana, fiofanana, saram-panaovana na fananana amin'ny zavatra iray. Amin'ny farany, dia lasa nofy ratsy izany. Mitandrema.
Ny halatra famantarana
Tamin'ny taona 2004, ny fangalarana ny maha-olona dia voarakitra an-tsoratra amin'ny fitarainan'ny mpanjifany ambony any EtazoniaStates. Ny loza ateraky ny hosoka aterineto dia tena henjana ka mety hitarika amin'ny fahaverezan'ny vola rehetra ao amin'ny kaontin'ny banky. Ao amin'ioRaha ny marina, ireo mpangalatra dia manafina ny maha-izy azy ireo amin'ny fidirana amin'ny kaonty any amin'ny banky. Ny mpihetraketraka dia tokony hampandreny ny banky, ny birao orinasa namitatitra amin'ny polisy avy hatrany.
Daty Daty Daty Daty
Fampahalalana manokana toy ny fahazoan-dàlana mitondra fiara sy pasipaoro ampiasain'ny hopitaly,banky, ary ny fikambanan'ny governemanta dia mety ho azon'ny mpametaveta atao matetika ary ampahibemaso amin'ny aterineto. Tonga amin'ny aterineto ny vaovaompihomehy noho ny fanararaotana sy ny fisotroan-dronono. Ny hosoka amin'ny aterineto izay misy ny hacking amin'ny database dia tokony hampahafantarina amin'ny fikarohana toy ny Google, Yahoo,ary Bing ho fanesorana.
Ny hosoka amin'ny aterineto dia mety amin'ny endrika mailaka mangataka fanampiana ara-bola. TheNy mpangalatra dia mametraka ny kaonty mailaky ny naman'ny niharam-boina ary mangataka fanampiana ara-bola amin'ny alàlan'ny Western Union. Misy toro-hevitra maromaro aoPCMag mba hisorohana ity endrika hosoka aterineto ity.
Mety ho fantatry ny olona ny hosoka amin'ny Internet. Antsoina koa hoe catfishing,Ny fampihetseham-pon'ny romans dia mitaky olona iray mihambo ho tia an'ilay niharan-doza. Ny mpangalatra dia manintona ny niharam-boina handefa vola ho an'ny dia lavitra na fitsaboanalany. Aza mandefa fanomezana ho an'ny olona tsy fantatrao.
Fifanakalozana ara-barotra amin'ny orinasa vahiny
Manana rafitra ny tambajotra iraisam-pirenena momba ny fiarovana sy ny fampiharanaizay mijery ny hosoka amin'ny aterineto izay midika ho fandoavam-bola amin'ny mpamatsy aterineto izay tsy manome ny vokatra. Raha toa ka tsy tratra ny lamin'ny aterinetoilay mpividy, mila mitatitra ny zava-nitranga ho fanampiana.
Ny hosoka amin'ny fampiasam-bola amin'ny Internet
Mety hahatonga trotraka ny spam. Diniho ny Vaomieran'ny Securities and Exchangeraha toa ianao ka lavo dia misy trangam-panahin'ny spam iray.